Tichiri kuda kuenda kuCHAN: Zifa | Kwayedza
07 Jan, 2021 - 10:01	 2021-01-07T10:12:20+00:00 2021-01-07T10:12:20+00:00 0 Views
MANEJA wechikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors — Wellington Mpandare — anoti vakanyorera kuHurumende vachikumbira mvumo yekuti vaende kuCameroon kunokwikwidza kumutambo weAfrica Nations Championship (CHAN) uyo unofanirwa kutanga nemusi wa16 Ndira.
MaWariors anofanirwa kusimuka musi wa11 akananga kuCameroon kunokwikwidza kumutambo uyu sezvo ariwo achavhurira makwikwi egore rino apo achasangana neCameroon iyo inenge iri pamusha.
Zvichitevera matanho akatorwa neHurumende ekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 izvo zvakaona mitambo yose ichimbomiswa munyika, Mpandare anoti sangano rinotungamirira nhabvu reZimbabwe Football Association (Zifa) rakabva ranyorera kuHurumende richikumbira mvumo yekuti vatenderwe kuenda kunokwikwidza kumutambo weCHAN.
“Takanyorera kuHurumende tichikumbira mvumo yekuti tigoenda kuCameroon kunokwikwidza kuCHAN.
Asi kutaura kuno tichiri takamirira kunzwa kuti vachati kudii nenhau yacho.
Asi isu tiri kuda chaizvo kuenda kunokwikwidza,” anodaro Mpandare.
Svondo radarika, vatambi vapfumbamwe vemaWarriors vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 izvo zvakazotuma murairidzi wechikwata ichi kuti adome vamwe vatambi gumi kuitira kuti kana vakabatwa nedenda iri vakasapora vozovatakura kuenda navo kuCameroon.
Mpandare anoti vatambi vakabatwa neCovid-19 vose vachaongororwa nemusi weChina svondo rino.
“Sekuziva kunoitwa, munhu anenge abatwa kuti ane Covid-19 anogara mazuva 10 ari pake oga saka vatambi vedu vose vakabatwa nechirwere ichi vari kwavo voga uye kana zvikasasanduka tine vamwe vatakaudza kuti vagare vakagadziririra.
“Saka nemusi weChina vose vakabatwa kuti vane Covid-19 vachaongororwa zvekare kuti chirwere ichi chichiri mumuviri yavo here kana kuti chakabuda,” anodaro Mpandare.
Kumitambo yeCHAN, maWarriors akaiswa muboka reGroup A rine zvimwe zvikwata zvinoti Cameroon, Mali neBurkina Faso.